Shongedza mabhasikiti ewicker ane zvinhu zvakadzokororwa | Green Renewables
Shongedza mabhasikiti ewicker
ChiGerman Portillo | 31/03/2022 12:00 | Imba yeGreen
Hapana chimwe chinonyaradza kupfuura kutora chinhu chatisingachashandisi uye kuchishandura kuva chinhu chitsva chinoshanda kana chekushongedza. Panyaya iyi tichadzidza shongedza mabhasikiti ewicker nezvinhu zvakagadzikiswazve, tswanda dzatingava nadzo kumba uye kuti chinhu bedzi chavanoita kuunganidza huruva. Nhasi tichadzidza nzira dzakasiyana dzekuvashongedza kuti vachinje chitarisiko chavo uye kuvapa zvinhu zvitsva mumba.
Muchikamu chino tichakuudza nzira yekushongedza mabhasikiti ewicker uye ndeapi anonyanya kufarirwa magadzirirwo.
1 Shongedza mabhasikiti ewicker
1.1 Shongedza mabhasikiti ewicker nezvinhu
2.2 plant poto
Sezvatichangobva kutaura, muzviitiko zvakawanda tine mabhasikiti ewicker uye tinoda kuvapa chinangwa chakasiyana pane kuchengeta guruva, dambudziko nderekuti havapindirani zvakakwana nekushongedza kweimba yedu kana isu hatizivi kuti sei. kuvashongedza. Ticharatidza zvimwe neshinda, shinda, pendi, matombo, mateko, pom pom nezvimwe.
Isu tinokwanisa kushandura kutaridzika kwemabhasikiti edu e wicker kuti tiite zvinhu zvakasarudzika uye zvakasarudzika pasina kuisa mari yakawanda. Dai taizoshandisa zvimedu zvemakushe kubva kumba, chimiro chiri nyore chaizochinja chitarisiko chayo zvakanyanya. Muchiitiko ichi, takasarudza kuzviita tichishandisa nzira yekucheka tichishandisa shinda yeEgyptian donje. Chishongo chakanaka, chinotevera chidzokororo chemaitiro chinoumba madhirowa muchiitiko chegoko iri, kunyangwe uine zvakawanda zvakasiyana zvirongwa zvekugadzira. Kupedzisa dhizaini, tinogona kusanganisira mimwe mitsetse yakafanana, kureba ndiko kwatinoda.
Imwe sarudzo yekushongedza bhasikiti nemvere dzemakwai ndeyekuita zvakasiyana-siyana kudhindwa, munyaya iyi yemaruva, uye senguva dzose inopera ne crochet border yakaisvonaka yatichasonera pamusoro pebhasikiti. Mabhasikiti akashandiswa naambuya vedu, iwo mabhasikiti epakutanga, azere nenhoroondo uye anokwezva, anogona kushandiswa zvakare semabhasikiti ekuchengetera kana kungoita sechidimbu chakanaka chekushongedza.
Painting iri nyore uye isingadhuri mhinduro yekuchinja chitarisiko chayo. Penda bhasikiti nemavara ane fashoni seyakacheneruka pink uye mint yegirini, kana kuenda kune rumwe ruvara runoshamisa senge dema kuitira shanduko inoshamisa. Bhegi rakareruka rewicker rakaiswa machira atinoda. Nerubatsiro rwetambo yakakwenenzverwa uye mamwe mateko akanaka awakabata pamucheto wefurati yako, tinogona kugadzira akadai ekutanga uye akanaka dhizaini. Kana iwe ukaisa zvidimbu pahupamhi hwakasiyana, sarudza chidimbu chinonyanya kufadza chekuguma kwetambo imwe neimwe. Iyo goko rakashongedzwa nependi rinopa kuti riwedzere mhepo yemunhu, richiunza zvimwe zvinhu.
Shongedza mabhasikiti ewicker nezvinhu
Kana iwe uchida kupa yakawedzera rustic uye kumba kutarisa kukamuri yako yekutandarira, kuishandura ive nzvimbo yekuzorora uye yekuzorodza, yakashongedzwa wicker mabhasikiti ndiyo yakanakisa chishandiso. Kushandisa zvimedu zvemucheka zviri nyore, chikamu chakaoma ndechekutsvaga machira anokwana zvakakwana pamwe nekushongedza. Scrapbooks ane yakanaka, yakapfava yakapfava grey mitsetse ine chokwadi chekurova.
Wicker mabhasikiti uye maruva anoita seakanyanya kubudirira musanganiswa, uye anogona kunge ari. Hapana ongororo iri nani pane kutarisa mimwe mienzaniso inoshanda. Shongedza dengu rewicker uye iwe unogona kuwana inofara uye ine maruva fomu mumba mese.
Mukushongedza kwakawanda, maruva anogadzirwa nealuminium kuitira kuti agare kwenguva yakareba kupfuura maruva echisikigo. Kuti tivagadzire tinogona kushandisa zvinwiwa zvinwiwa, uye panzvimbo yekuzviisa mumidziyo, tinovapa hupenyu hwechipiri hunoshongedza. Maruva emucheka, maruva esiriki kana maruva emapepa Vanogonawo kuva nzira yakanaka yekushongedza bhasiketi rewicker, kushandisa t-shirts yekare kana kunyange mashizha akaraswa tinogona kuita maruva emhando dzakasiyana-siyana, mavara uye maumbirwo, uye anonamatira kubhasiki nepfuti yeglue kana tswanda.
Pom poms inowanzoshandiswa pakushongedza kuwedzera ruvara. Kushongedza bhasikiti kana bhasikiti nemapom poms ichava nzira inofadza yekushandura kutaridzika kwebhasikiti yatinoshandisa kune zviputi kana mashizha emagazini. Mabhasikiti anochengeta matoyi ane mavara akajeka uye anonakidza pasina kushandisa pendi. Kana waneta nemavara, iwe unongoda kuwana chidimbu chemvere kuti wasara kuti uchinje kushongedza kwedengu rako.
Muchekechera kazhinji chinhu chatinoshandisa kushongedza zvibato kana madhirowa. Iye zvino, vanogonawo kutibatsira kushandura kutaridzika kwechero bhasikiti kana tswanda. Dhizaini dzakadai semipendero mitsetse kana mipendero yega, chero chaunoda kuratidza. Sezvataona mumienzaniso miviri, mupendero unoshongedza uye unowedzera hupenyu uye ruvara. A carrycot, pasinei nechimiro chayo kana kunyange hukuru hwayo, inogara ichigamuchira kushongedza mumhando yemafringe. Tswanda inonakidza uye ine mavara, kana imwe chete yakanyanyisa ruvara, kunyange kana ichiuya mumhando dzakasiyana-siyana, kana tikashandisa ruvara rwakafanana nemuchena, inowedzera hippie.
Muimba yega yega, nekukurumidza kana kuti gare gare, iwe uchada bhokisi, sutukesi kana yakakura kuronga iyo, kunze kwekushongedza, inoshanda kuchengetedza zvinhu uye kuronga nzvimbo yedu: kicheni, imba yekutandarira, imba yekudyira, facade, imba yekurara, yekugezera ... Matoni ayo asina kwaakarerekera anoita kuti zvive nyore kusanganisa nemhando dzese dzefenicha, uye kuve chigadzirwa chechisikigo, inogara ichipa chaiyo uye yechokwadi kubata.
Kushandiswa kukuru kwematengu madiki uye epakati wicker ndiko kuchengetwa kwemarudzi ese ezvinhu: midziyo yekubikira nezvikafu, midziyo yekugezera, matauro, chikafu, zvemuhofisi, zvekugezesa, mabhodhoro, magazini nemabhuku, zvekusonesa... mabhokisi ewicker, kunyanya akaomarara, ndechimwe chezvinhu zvinobatsira zvekushongedza zviripo. Kana vakatsvinda zvakare, zvakaoma kuramba.
Wicker mabhasikiti ndiyo nzira yakakwana yekuronga uye kuratidza zvidyarwa nemaruva, angave matsva kana akaomeswa. Pamusoro pemabhokisi madiki uye epakati akaomesesa wicker mabhokisi, akarukwa wicker muchimiro chebhasikiti akawedzerwa, yakakwana pakuratidza maruva pateresi yako kana mubindu rako pachako.
Muchipfeko chejasi muhoro, inogona kushandiswa kuenda kunotenga, kana pane bhasikiti inogona kushandiswa senzvimbo yekuchengetedza machira kana machira, kana sechinhu chinoshongedza chekushongedza mukova.
Wedzera imwe kuhoro uye isa mamwe matavi eucalyptus, uye pane chinyorwa chemagazini chinonhuwirira zvakanaka paunongovhura suo.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvekushongedza mabhasikiti ewicker.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Shongedza mabhasikiti ewicker
Solar panels: Zvese zviripo zvekuziva nezvazvo